‘संस्थागत निर्णय’ भए माधव पक्षले जेठ ६ गते बादललाई नै भोट हाल्ने – Nepal Press
‘संस्थागत निर्णय’ भए माधव पक्षले जेठ ६ गते बादललाई नै भोट हाल्ने
२०७८ जेठ २ गते ११:३६
काठमाडौं । चार दिनपछि हुने वागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा एमालेको माधव नेपाल पक्षले कसलाई मत दिन्छ ? आफ्नै प्रस्तावमा कांग्रेस र माओवादीको समर्थन लिएर उठेका स्वतन्त्र उम्मेदवार खिमलाल देवकोटा कि एमालेको संस्थान पक्षले उठाएका सूर्यचिन्हधारी उम्मेदवार रामवहादुर थापा बादललाई ?
शुक्रबार र शनिबार भएको माधव नेपाल पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको भर्चुअल बैठकमा पनि यसबारेमा सामान्य छलफल भयो । तर, यसबारेमा कुनै निर्णय भने नभएको केन्द्रीय सदस्य तथा वागमती प्रदेशसभा सदस्य रचना खड्काले नेपाल प्रेसलाई बताइन् ।
खड्काले भनिन्, ‘समग्र एमाले पार्टीको एकताको कुरा छ । एउटा व्यक्तिको कुरा होइन । पार्टीले संस्थागत रूपमा निर्णय गरेपछि एमालेकै उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने कुरा छँदैछ । संस्थागत निर्णय भनेको केपी ओली र माधव नेपालसहितको बैठकले जे निर्णय गर्छ हामी सोही पालना गर्छौं ।
दुई नेताबीच वार्ता भएर पार्टी मिलाउने न्यूनतम सहमतिका साथ कार्यदल गठन भएपछि जेठ ६ गतेको निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई नै मत दिइने माधव पक्षको भनाइ छ । एमालेको मत एकै ठाउँमा हुनासाथ बादलको जित सुनिश्चित हुन्छ ।
वागमतीका स्थानीय तह र प्रदेशसभा सबैतिर एमालेको एकल बहुमत छ । प्रदेशसभामा एमालेका ५७ मध्ये २२ सांसद माधव पक्षका छन् भने स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख १३३ जनामध्ये माधव पक्षमा ३८ जना खुलेका छन् । यो भनेको निर्णायक मत हो ।
एमालेभित्रका मतदाता को कता छ ? त्यसका लागि यो समाचारभित्र जानुहोस्
राष्ट्रियसभा उपचुनावको गणित- एमालेका जनप्रतिनिधि को कता ? (सूचीसहित)
प्रकाशित: २०७८ जेठ २ गते ११:३६
जनसंख्या वृद्धिदर सुस्त भएपछि चीनले २०२५ सम्म ‘वान चाइल्ड पोलिसी’ अन्त्य गर्ने